Saraakiil Katirsan Maamulka 'Puntland' Oo Lagu Dilay Maagaalada Gaalkacyo.
Wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in toogasho ka dhacday magaalada Gaalkacyo lagu dilay saraakiil katirsan maamulka 'Puntland' isku magacaabay.
Rasaas maanta gelinkii dambe ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ayaa sababtay dhimashada sedax qof oo mid kamida uu ahaa sarkaal sare oo katirsanaa ciidanka ilaalada garoonka diyaaradaha.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in askari hubeysan uu dilay Col.Cabdi Salaan Sanyare iyo laba qof oo gudaha garoonka ku sugnaa, wadarta dhimashadu waa 3 qof oo labo ay askar yihiin halka midka kale uu ahaa shacab.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in markii uu dilku dhacay kadib ay ciidamada maamulka ‘Puntland’ fuliyeen howlgallo raaf ah iyagoo gacanta ku dhigay askarigii dilka geystay iyo dad shacab ah sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaal ah.